Endinakoho na tononakoho
Trondro maina sy anamalao
Ny Bokini Ezra na Bokini Esdrasa dia boky ao aminny Tanakh sy ao aminny Testamenta Taloha ao aminny Baiboly kristiana. Mitantara ny fiverenan’ireo babo an-tanidrazana voalohany avy any Babilona, ny nahavitana ny Tempoly vaovao ao Jerosalema, ny i ...
NY FIAINANY SY NY FIANARANY Teraka tao Ambositra tany ho any amin’ny taona 1900 ANDRIANALY Alfred izay fantatra amin’ny solon’anarana hoe Eliza Freda. Nodimandry ny 1962 teo amin’ny faha-62 taonany izy. Voataiza tamin’ny fivavahana Kristianina iz ...
Hoy ny ohabolana malagasy hoe "Ny kibo tsy mba lamosina, ary ny tsinay tsy mba vatsy". Ka ireto misy karazana sakafo vitsivitsy, sakafo malagasy atolotra anareo.
Ny bononoka dia sakafo azo avy aminny fandomana Mangahazo, ka ahazoana mangahazo mahasalama kokoa sy matsiro kokoa. Misy fofona somary mahery izy ka lasa tsy itiavanny olona sasany azy. Ny mangahazo vita bononoka dia azo amainina sy totoina ka an ...
Avy aminny teny frantsay nohagasiana hoe "sauce" ilay teny gasy hoe saosy. Ampiasaina aminny heviny roa farafahakeliny izy io: Adika ho mitovy hevitra aminny vola ihany koa indraindray ny teny hoe saosy. Raha ny marina ny ihavianilay hevitra dia ...
Ny sikidy na sikily dia fanao fahita manerana ani Madagasikara izay azo avy taminny sikidy arabo, izay niely erani Afrika noho ny fiparitahanireo Arabo sy Silamo taty aminny kontinenta. Isanny singa iray mandrafitra ny finoan-drazana malagasy ny ...
Ny mangahazo na kazaha na kajaha na balahazo na mahôgo dia zavamaniry amin’ ny faritra mafana, avy any Amerika. Toy ny hazo kely maniry ny mangahazo ka mety mahatratra 240 sm ny haavony miala amin’ ny tany. Miloko mavo manopy maitso ny voniny. Ny ...
Ny Haza na Haja, araka ny fanaovana sikidy malagasy, dia ny tsanganan-tsikidy fahiraika ambinny folo, isanireo tsanganan-tsikidy valo atao hoe tera-tsikidy, izay apetraka any aminny fàfana faharoa eo ambaninireo atao hoe renin-tsikidy, vokatry ny ...
Ao aminny haiteny ara-piofohana, izay lazanny mpikaroka ao aminy fa mitondra fanitsiana aminny asa nataonny haiteny araka anjara asa malagasy, dia iray aminireo fiendrika telo ny fiendrika anoina, ka ny roa hafa dia ny fiendrika manano sy ny fien ...
Ny nify dia taova misy taolana, mafy, miloko fotsy, misy couronne sy misy fakany. Ny nify dia ilaina mba ahafahana manapaka, mandrovitra, manapotika na manamontsamontsana ny sakafo izay tafiditra ao am-bava ka hanamora ny fitelemana sy ny fandevo ...
Ny mosavy dia fisomparana olona amin ny alalanny ody ratsy na vorika. Matetika dia avy amin ny filalaovana ody ny mahatonga ny olona iray ho lasa mpamosavy. Tranga fandre matetika ny maka ody fitia any amin ny mpimasy kanjo afotitr iny ody iny il ...
Atao hoe sokajin-teny ny vondrona misy ireo teny afaka mifanolo hisahana anjara asa mitovy am-pehezanteny ao amin’ny fiteny iray. Mizara ho vondrona roa lehibe ny teny, dia ny reniteny sy ny zanateny. Ny sokajin-teny fahita matetika dia ny anaran ...
Ny fitodika zoina dia fitodiky ny fehezanteny ahitana teny na tarika misahana ny anjara asa lazaina raha tokony ho fameno zoina, sady matetika ahitana matoanteny na aminny fiendrika mifanentana aminio fitodika io, arakaraka ny fiteny. Aminny anka ...
Ny Alakamisy dia andro fahefatra ao aminny herinandro raha ny Alatsinainy no andro voalohany fa andro fahadimy kosa raha ny Alahady no andro voalohany. Andro voalohany ny Alakamisy ho anny Malagasy mandala ny nentin-drazana tsy mandray ny Alatsin ...
Ny toekaren i Madagasikara dia toekarena mifototra amin ny fambolena sy fiompiana na dia misy ihany aza ireo sehatr asa hafa, satria ny 70 %n ny mponina dia tantsaha mpamboly sy mpiompy. Anisan ny firenena mbola an-dalam-pivoarana eto an-tany i M ...
Ny Ntaolo dia ireo razam-be tany aloha. Mitory fanajana sy fankatoavana ny fahendreny ihany koa ny fampiasana ny teny hoe Ntaolo. Araka izany dia manana ny hajany teo aminny fiaraha-monina malagasy tokoa izany hoe Ntaolo izany. Ny fototeny dia ny ...
Antsirabé Antsiranana Andoany Anjozorobe Antananarivo: renivohitra, 1.2 mpo. 2003 Antanifotsy Antsohimbondrona Ambalavao Amparafaravola Ambovombe Antsiranana Diego-suarez
Ny foko eto Madagasikara dia vondron olona isan ny vahoaka malagasy izay heverina fa iray faritra niaviana, nanana fandaminana ara-pôlitika iraisany na nitoviany tamin ny vanimpotoana faha mpanjaka, manana ny fomba fitenenany ny teny malagasy iza ...
Jean-Louis Robinson, teraka taminny 1952 tao Ampasikely, dia olom-pirenena malagasy. Taminny governemantani Ravalomanana izy dia minisitry ny fanatanjahan-tena, ny fahasalamana, ny fandrindram-piterahana, ny fiarovana ara-tsôsialy 2004-2008 ary m ...
Omega Ny hainkintana dia siansanny voajanahary mikasika ny fandinihana ny kintana, izay mitady ny hamaritra ny fihaviany, ny fivoarany ary ny tondrony ara-pizika ary ara-tsimika. Fito arivo taona lasa izay ny taranjan’ny hainkintana no fantatry n ...
Ny Bokini Henoka na Bokini Enoka dia fanangonan-dahatsoratra apokaliptika isan’ny literatiora tanelanelan’ny Testamenta roa; apokrifa na pseodepigrafa ho an’ny Testamenta Taloha izy ka tsy isan’ny kanonan’ny Baiboly hebreo na katolika na protesta ...
Ny vondron-kintana dia toerana ahitana kintana maro dia maro izay nifanakaiky taminny alalanny hery vokatry ny lanja. Tsy kintana irery akory no misy ao aminny vondron-kintana fa ahitana, vovo-kintana, etona, plasma, ary zavatra mainty izay tsy h ...
Ny Bokinny Jobily dia boky tsy hita afa-tsy ao amin’ny Baiboly ortodoksa etiopiana. Ny tanjon’ilay boky dia ny hamporisika ny Jiosy amin’ny fifikirana amin’ny Torah, amin’ny fotoana nahatonga ny Jiosy hiharan’ny kolontsaina jentilisa. Misy ny tan ...
Marsa dia fajiry na planeta faha efatry ny laminny masoandro. Izy ny fajiry kely indrindra eo aorianny Merkora. Ao aminny fianankavianny planety teliorika izy. Ny anarany dia avy aminny andriamanitra Marsa, anarana romananny andriamanitra grika A ...
Ny tambajotra nerônina dia teny hitononana ireo tambajotra nerônina voajanahary na voatrolombelona. Aminny taranjanny kajimirindra ny tambajotra nerônina dia midika tambajotra nerônina voatrolombelona, ary aminny taranjanny biolojia, ny tambajotr ...
Ny taratra elektrômanetika dia fanakorontanana ny saha araka aratra ary araka andriamby. Ny mpitondra ny taratra elektrômanetika dia ny voankazavana, voanjavatra tsy manan-danja. Ny voankazavana dia ny boson miaraka aminny hery elektrômanetika. A ...
Ny baobab dia hazo tsy misy afatsy any Madagasikara, Aostralia, Afrika. Madagasikara. Misy karazany 9 izy maneran-tany, ny 7 aminireo dia ao Madagasikara no misy azy ary 6 aminizay dia tsy misy afatsy ao ihany, no 2 kosa dia miparitaka aminireo f ...
Ny Ekolojia "oikos" ; et λόγος. Ny Ekolojia dia fianarana siantifika ny zavatra mitranga mametra ny fizaràna sy ny fahabetsana ny zavamiaina. Siansa Biolojika ny ekolojia mianatra mombanny zavamiaina Biôsenôzy sy ny taranja fizika biôtôpy io zava ...
Ny Ra dia ranoka mitondra ny okzizena any aminny sela mamelona ny olombelona, ny plasma, ilay ranoka, ny tena betsaka indrindra aminny lafinny "proportion" ; misy ra daholo ny biby rehetra. Izaraina ny diôkzizena sy ny sakafo ilainny "tissu" O 2 ...
Ny tsoka, "tissu" velona any ampivoanny taolana be, dia manamboatra ny sela ny ra: Ny globule fotsy, ny globule mena sy ny plaquette. Manana karazana sela manokana ny tsoka: Ny CSH na foto-tsela mpanao ra) sy ny sela ny stirôma medullaire. Any am ...
Samihafa no andraisanny faritra ny teny hoe Fory eto Madagasikara; any aminny faritra Antsimonny Nosy ohatra dia fiteninolona matetika aty ny hoe Fory eny na dia eo mpianaka aza, ny tena marina ny dikanio teny io aty aminny Antsimo,ohatra aty tol ...
Ny filôzôfia, avy aminny teny grika φιλοσοφία midika "fitiavam-pahendrena", dia taranja misy hatry ny Andro Taloha. Ny filôzôfia aminny ankapobeny, dia ny fandinihana ny fototrolana, toy ny antom-pisianny tena, ny fahaizana, ny soatoavina, ny fah ...
I Aristôty na Aristôtelesy dia filôzôfy, mpanao asa soratra, mpahay kintana, mpahay fizika taminny Andro Taloha, teraka ny taminny taona 383 na 384 tal. J.K. ary maty taminny taona 321 na 322 tal. J.K. Aminny teny grika dia atao hoe Ἀριστοτέλης / ...
Ny siansa, raha aitatra ny dikany, dia izay nianarana ary fantatra taminny alàlanny fampianarana, izay lazaina fa tena marina. Ny tanjonny fikambanana siantifika, dia mamoaka "fahalalana siantifika" avy aminny fomba famakafakana azo ankatoavina a ...
I Platô na Platôna dia filôzôfa tao Grisia tamin ny Andro Taloha, izay niaina tamin ny vanimpotoan ny demôkrasia ateniana sy tamin ireo Sôfista izay notsikerainy. Notohizany ny asa ara-pilozofian ny mpialoha lalana azy sasany, indrindra i Sôkraty ...
Ny taôisma dia sady fivavahana no filôzôfia izay iray amin ireo andrin ny filôzôfia sinoa, ka ny roa hafa dia ny kônfosianisma sy ny bodisma, izay miorina amin ny fisian ny foto-javatra niandohan ny zavatra rehetra, atao hoe Taô. Ny taôisma dia a ...
Ny foto-pampianarana dia fitambaranny fiheverana ao amin ny rijan-kevitra apetraky ny mpanoratra na ny vondro-mpanoratra ho marina. Ny foto-pampianarana dia mety ho heverina indraindray ho mamitaka, tsara lahatra ka marina ivelany fotsiny, na tsy ...
Ny antom-pisian’ny olona dia izay fanontaniana filôzôfika mikasika ny antony isian’ny olona ary ny tanjon’ny fiainany. Maro ny fanontaniana no manazava ity hevitra ity, ohatra" Maninona eto an-tany isika?”," Inona ny tanjon’ny fiainantsika?” ary" ...
Ny Fizika dia araka ny haiendri-teniny ny "siansanny zavaboary". Amin ny dikany amin ny ankapobeny na amin ny heviny voalohany, ny fizika dia fahalalàna ny zavaboary; io no hevitra nomen i René Descartes sy ny mpianany Jacques Rohault sy i Régis. ...
Ny Loka Nobel dia mari-pankasitrahana eo aminny sehatra iraisam-pirenena, atolotra anireo olona na fikambanana nahavita be sy nitondra soa teo aminny fiainanny zanakolombelona, na taminny asa soratra na taminny fikarohana, na taminny ezaka ho ann ...
1854: Nikolai Tretyakov - injeniera 1841: Wilhelm Breithaupt - mpamorona, injeniera 1855: Berkeley Deane Wise - injeniera sivily, injeniera 1869: Mohandas Karamchand Gandhi - mpanao politika, Mpanao gazety, filôzôfy, mpanoratra ny tantaranny fiai ...
Georg von Arco 1851: Jules Carpentier - injeniera, mpaka sary, mpamorona 1856: Carl Runge - mpanao matematika, mpahay fizika 1847: Hermann Einstein - mpiantoka, injeniera 1869 1748: Jacques-Louis David - mpanao politika Henry F. Hollis - mpanao p ...
Edward Rimkus 1868: Theodore Marston - talen-koronantsary, mpanoratra senariô 1912: Jorge Amado - mpanoratra, Mpanao gazety, Poeta, mpanoratra tantara lava 1889: Charles Darrow - mpamorona 1909: Leo Fender - 1913 1806: Julius Weisbach - mpanao ma ...
1819: Austin Belknap - injeniera sivily, injeniera, mpanao politika 1837: Vasil Levski - 1892 Arthur Friedenreich 1848: W.G. Grace - Dokotera 1635: Robert Hooke - mpahaikintana, mpahay fizika 1856: Giacinto Morera - mpanao matematika, injeniera 1 ...